रुकुम पश्चिम ‘हत्याकाण्ड’ : थप एक जनाको शव भेटियो, वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा आक्रमण ! — onlinedabali.com
रुकुम पश्चिम ‘हत्याकाण्ड’ : थप एक जनाको शव भेटियो, वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा आक्रमण !
जाजरकोट । प्रेम विवाहलाई लिएर पश्चिम रुकुममा गरिएको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका थप एक जनाको शव भेटिएको छ । चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीकी मल्ल थरकी युवती र जाजरकोटको भेरी नगरपालिका ४ का नवराज बिकबीचको प्रेम सम्बन्धलाई लिएर गाउँहरुले आक्रमण गरेका थिए ।
आक्रमण परी बेपत्ता भएका भेरी नगरपालिका–४ गणेश बुढाको लाश फेला परेको हो । अझै चारजना बेपत्ता भएको जाजरकोट प्रहरीले बताएको छ । यसअघि केटीका प्रेमी भेरी नगरपालिका–४ का २१ वर्षीय युवा नवराज विक र उनका साथी चौरजहारी नगरपालिका–१ टीकाराम सुनारको शव फेला परिसकेको थियो । वेहुली ल्याउन गएका १२ जना घाइते छन् ।
चौरजहारी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष डम्बर मल्लको नेतृत्वमा आक्रमण भएको आरोप केटा पक्षले लगाएका छन् । यसैबीच प्रहरीले वडाअध्यक्ष मल्लसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुले घटना सामुहिक हत्याकाण्ड भएको भन्दै दोषीलाई कारवाहीको माग गरेका छन् ।
परिवारले अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धलाई अस्वीकार गरेपछि केटीले नवराजलाई विवाहको लागि बोलाएकी थिइन् । वेहुली ल्याउन भनेर १९ जना गएका थिए । उनीहरुलाई गाउँलेहरुले लखेटीलखेटी कुटपिट गरेका थिए ।
प्रहरीकाअनुसार भेरी नगरपालिकाका सञ्जु विक, गोविन्द शाही, लोकेन्द्र सुनार र गोपाल बुढाथोकी अझै बेपत्ता छन् । उनीहरुलाई गाउँहरुले भेरी नदीमा फालेको घटनाबाट बचेकाहरुले बताएका छन् । गाउँलेको कुटपिटबाट घाइते भएका आशिष विक र सरोज भँडेलले गाउँलेहरुले गालीगलौज गर्दै ढुङ्गामुढा प्रहार गरेको बताउँछन् । केटीका परिवारले आज सबैलाई मार्ने हो भन्दै आक्रमण सुरु गरेको आशिषले बताए ।
पीडित परिवारले दोषीलाई कारवाहीको माग गर्दै जाजरकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । उनीहरुले दोषीलाई बचाउन खोजिएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।
जनयुद्धको उद्गमको रुपमा मानिँदै आएको पश्चिम रुकुम जातीय छुवाछुतमुक्त घोषणा गरिएको थियो ।